Date My Pet » Ny fitiavana ao amin'ny 7 Easy Dingana
Lavo amin'ny fitiavana no iray amin'ireo fihetseham-po mahagaga indrindra eran-tany. Feno ny madio sambatra sy afa-po, satria tia ny olona tsara mahatonga anao hihevitra fa raha afaka mandresy na inona na inona. Rehefa tena tia ny olona, miaina ny fifaliana sy ny alahelo na dia tena porofo ny amin'ny fahadiovam-po sy ny fifandraisana akaiky. Raha sarotra fitiavana, efa voalaza eto ambany ny fitiavana sy ny fomba hahatratrarana fitiavana maharitra amin'ny 7 mora ny dingana.
Dingana #1: Ilay
Ny fanahinao vady dia miandry ny ho hita. Ankamaroan'ny fotoana, fantatrao avy hatrany rehefa mihaona ny tapany hafa, fa mampifandray ny roa lahy ary dia hahatsapa toy ny hoe efa mahalala azy ireo mandrakizay. Rehefa nahita izany, dia zava-dehibe ny mifantoka amin'ny zavatra tsara ihany. Mitady lesoka eo amin'ny mpiara-miasa fotsiny dia hitarika ho amin'ny alahelo. Mianara manaiky ny lafiny rehetra ny namanao ary vokatr'izany dia, dia hahazo ny tsy fivadihana sy ny fitiavana mandrakizay.
Dingana #2: Cater any amin'ilay namanao ny zavatra ilain'ny
Eo amin'ny fifandraisana rehetra dia zava-dehibe fa ny zavatra ilaina dia mandanjalanja amin'ny mpiara-miasa. Ankamaroan 'ny fotoana dia ho eo amin'ny pejy ihany fa hisy toe-javatra sasany sy ny fotoana samy hafa ny zavatra ilaina. Zava-dehibe ny mametraka ny tenanao ho amin'ny namanao ny kiraro mba hahazoana antoka fa ny zavatra ilaina rehetra dia nihaona.
Dingana #3: Henoy ny mpiara-miasa
Mihaino ny Olona Iray Tianao no fomba tsara indrindra mba hianatra hoe iza izy ireo ankoatra ny fomba izay ilainy. Izany koa dia hanampy anao mba mahatsapa ho mifamatotra amin'ny namanao, hahatakatra izay izy ireo amin'ny olana manokana, manohana azy ireo amin'ny fotoan-tsarotra, ary mahita fomba samihafa mba hanampy sy hahatonga azy ireo ho mitsiky. Toy ny olombelona, foana isika mianatra sy mitombo izay no mahatonga ny fihainoana dia zava-dehibe ny fitandremana ny fitiavanao mahery.
Dingana #4: Mankasitraka ny mpiara-miasa
Manaja amin-kitsimpo ny zava-tsoa rehetra momba ny mpiara-miasa sy ny zavatra tsara izy ireo hanampy hanamafy ny fatoram. Mifantoka amin'ny ny tsara no mahatonga azy mora kokoa ny hamela zavatra hafa handeha, hiraharaha fialam-boly ny fifanarahana, ary mba hanaiky ny asa ny miaina mifanaraka ny mpiara-miasa andrasan'ny.
Dingana #5: Hiaraka amin'ny namany
Drafitra miara-mandany fotoana dia tena ilaina ny mitombo toy ny mpivady. Ny fanokanana fotoana niarahana, dia hahazo ny hizara ny hevitrao, fihetseham-po, ary ny olana. Nizara izany fotoana, ny fatorana dia kokoa namorona ny fisakaizana akaiky ankoatra ny tantaram-pitiavana iray fifandraisana. Ny fanalahidin'ny fitiavana mandrakizay no ho tonga ny tsara indrindra ny namana.
Dingana #6: Aoka ianao ho tsara fanahy amin'ny namanao
Raha ny hevitrao ny zavatra tsara, hilaza izany any amin'ilay namanao. Ny hatsaram-panahy dia mbola fahita firy ny fomba mahery vaika toetra tantaram-pitiavana. Raha maka mora ny ho tsara fanahy, meanness mihinana lasa farany amin'ny fiaraha-miasa raha mbola hatsaram-panahy no mikolokolo.
Dingana #7: Ataovy velona ny olon-tiany
Ny tantaram-pitiavana diany na fihetsika tsy nampoizina ihany ny tonga lafatra, fa ny zava-nitranga dia manampy mba zavatra velona sy ny mpankafy. Ny fiainana miaraka zava-baovao dia hanampy mba handry vaovao sy zava-mahaliana momba ny hafa.
Raha lavo amin'ny fitiavana no mahafaly, dia zava-dehibe ihany koa ny mahatsapa fa ny fitiavana sy ny hamafin'ny dia tsy mitovy amin'ny fifandraisana akaiky. Mila herim-po sy ny fitiavana ny asa, ary izany dia ny fitambaran'ny maro ireo lafiny samihafa izay mahatonga ny fitiavana mafy. Fa indray mandeha fa mafy ny fitiavana mahatratra sehatra, dia lasa tsy azo hozongozonina fanohanana mora na amin'ny sarotra, ary izany dia fifandraisana izay afaka tena tsy ho tapaka.